I-Gooseberries - le shrub engapheliyo, ekuphakameni kwayo ikhula ukusuka kwi-0, 5 m ukuya ku-1, 5 m. Amasebe we-gooseberry aneenqabana ezinqabileyo. Amajikijolo ahluke ngendlela, umbala kunye nobukhulu, ngaphezu koko, ayifumanekanga okanye i-pubescent. Umbala wesiqhamo uthinta iindidi ze-gooseberry, ngoko kukho uhlaza oluhlaza okwesibhakabhaka, obomvu kunye obomvu we-gooseberry. Ngaphakathi kweeriteji kukho umxholo omkhulu wembewu. Iipropati eziwusizo ze-gooseberry zibangelwa yi-chemical composition. Yiyo kanye kanye esiya kukuxelela namhlanje.
I-Gooseberries isasazwa kumazwe onke aseYurophu, amazwe aseMntla Melika naseAsia. EYurophu, njengamazwe amaninzi aseYurophu, ukususela ekuqaleni kwekhulu le-17 i-gooseberries yayingumngcele ogqithiseleyo, kodwa ngaphambili wawubizwa ngeendlela ezahlukeneyo-i-bits-cap okanye i-borsen. Ukusuka apha eBersenevskaya emangcwabeni, esiseMoscow sibonga kwintsimi yebhotwe, apho abalimi breden borsen, kwaye bafumana igama layo. Nangona kunjalo, ekuqaleni kwekhulu lama-20, i-gooseberries inesifo-i-spherote (yimizimba ye-powdery mildew), kwaye phantse zonke iintlobo zatshatyalaliswa. Lesi sifo se-gooseberry saziswa saseMelika. Kulo suku lusinda kwaye lwenziwa ngokukhethwa kwezihlobo ze-gooseberry ezilandelayo.
I-Gooseberries, njengamajikijolo amaninzi egadi, iqulethe izakhiwo ezincedo. I-Gooseberries ityebile kwi-pectin, i-acid acids, i-sodium, i-calcium, i-potassium, ithusi, i-magnesium isalti kunye nama-tanins. I-Gooseberries, ngaphandle kwamagilebhisi, ayithathwa njengama-berries amaningi. Kwi-100 gram ye-gooseberry iqulethe ngaphezu kwe-50ml. iivithamini C, iivithamini PP kunye neB1, i-rutin, i-carotene, ininzi yesinyithi kunye ne-phosphorus.
Iziqhamo ze-gooseberry zizityebi zesinyithi, i-ascorbic kunye ne-folic acid. Iziqhamo ze-gooseberries ziqukethe amanzi - i-88-98%, i-sugars - 7, 2-13, i-5%, i-acids-1, 2-2, i-5%, i-pectins 0, i-64-1, i-1%, ngaphezu koko, usawoti wamaminerali.
Ukuphulukisa iipropati ze-gooseberries.
Iziqhamo ze-gooseberries zineempembelelo zomsindo, kodwa zinefuthe elincinci kunye ne-laxative effect. Iibroji ze-gooseberries nazo ziphucula iimeko zomzimba kunye negazi, ziqhelanisa iinkqubo ze-metabolic emzimbeni, zomeleze iindonga zemithambo yegazi.
I-Gooseberries iyanconywa ukuba isetyenziswe kolu xinzelelo, ukukhuluphala, isifo senhliziyo, i-anemia kunye ne-atherosclerosis. I-gooseberries esebenzayo kunye ne-skin rashes, i-anemia, inxulumene nobusi kunye nokuvutha kwamaxesha amaninzi, ukwenzela ukuvuselelwa kwe-bile, ukuphucula intlungu. Kunconywe i-gooseberry kunye nalabo abaneengxaki zesibindi, izifo zesibindi kunye neengtso. Ijusi ye-gooseberry yilungiso eliqabulayo kakhulu, ngaphandle kokuba linomphumo ozuzayo kumetabolism.
Amajikijolo e-gooseberries asusa emzimbeni onobuthi obuyingozi, ngokukodwa, izinto ezinokutsha. Amajikijolo omisiwe we-gooseberries agcina iipropati zawo ngokuphantse.
Abantu abanengxaki ye-enteritis okanye i-peptic isilonda, ikakhulukazi kwisigaba esichukumisayo, bacetyiswa ukuba banciphise okanye bangafaki i-gooseberries ekudleni ngokupheleleyo, kuba iqulethe inani elikhulu le-acids ye-organic kunye ne-fiber.
Ukusebenzisa i-gooseberries kwiyeza.
Ngezifo zesibhambiso kunye neentso, kucetyiswa ukuba usebenzise i-gooseberry entsha njenge-diuretic efanelekileyo. Ngezifo ezahlukahlukeneyo zomdanso wokutya, kuquka ukuxilongwa okungapheliyo, kuya kuba luncedo ukutya i-gooseberries.
Iziqhamo ze-gooseberries nazo zinoqabulayo, i-choleretic, i-diuretic, i-hemostatic, i-anti-inflammatory and restorative effect.
Iziqhamo okanye izithelo ezinjenge-decoction zimiselwe ukuba kukho ukunqongophala kwentsimbi, ubhedu, i-phosphorus emzimbeni, kunye ne-hypovitaminosis, ukuxilongwa okungapheliyo, ukuphuma kwamanzi, kunye neengxaki ezahlukeneyo zesisombululo (ubunzima obukhulu), i-gastroenterocolitis, i-hydrocephalus, izifo zesikhumba, i-beriberi A kunye no-C I-Gooseberries isetyenziselwa ukuqinisa iindonga zemithambo yegazi.
Iincomputer ezivela kumajikijolo ama-gooseberries aphantsi kweqondo lokushisa lomzimba kwaye zicima ukoma.
Ukutya i-compotes ikwacetyiswa kunye ne-anemia, ukukhuluphala, uxinzelelo lwegazi, isifo senhliziyo. Kwi-berries evuthiweyo ye-gooseberries, amaxesha amabini ngaphezulu kwe-ascorbic acid kunama-berries aluhlaza.
Amajikijolo e-gooseberries angadliwa ngokutsha kunye nokuphindaphinda kwakhona. Ukusuka kwiipods zezi zityalo ziphuza i-jelly, i-jam, i-pastille, i-compotes.
Senza jam kwi-berries ye-gooseberry. Ngomngcambu, iintlobo zeMashek, Shchedry, Yarovoy, ibhotile yeGreen, i-Malachite ibaluleke kakhulu. I-jam kufuneka ithathe i-gooseberries encinci, kwaye amajikijolo ahlanjululwe ngamanzi abandayo, asuse iikomityi ezomileyo zezimbali kunye neziqu. Amancinci, kunye neziqhamo eziphakathi kwe-gooseberries ziphekwe ngokupheleleyo, kuphela kubalulekile ukuba uzibambe ngaphambili. Kwiijikijolo ezinkulu senza i-incalcision incision kunye ncediso lwepini okanye i-hairpin siyabasusa kwimbewu.
Ukuba ugaxekile uthatha isigqibo sokuba uthathe i-gooseberry eluhlaza, ke emanzini ukuze udibanise kunye / okanye ukucola kufuneka ubeke amaqabunga aluhlaza e-cherry. Ngaloo ndlela, umbala obomvu wamajikijolo kunye ne-jam ugcinwe ngcono.
1 kilogram yamajikijolo e-gooseberry, i-1, 5 kilogram yeeshukela, ezimbini iiglasi zamanzi.
Amajikijolo angavuthiweyo e-gooseberries akhululwa kwii-corolla, ii-pedicels, kunye ne-pinal engxenyeni kunye nokusebenzisa ipini okanye i-hairpin ihlanjululwa kweesiliya, ihlanjwe kwaye igcinwe malunga nesiqingatha seyure kumanzi abandayo. Xa amajikijolo ekulungele, uwafake kwisitya, uthele isiraphu eshushu eshushu, ubambe malunga neeyure ezingama-3 uze upheke u-jam uze ulungele. Ekupheleni kokupheka, ungongeza enye i-vanillin. Ngaphezu koko, ukuphepha ukubunjwa kombala obomdaka obomvu, i-jam ekulungele ukulungiswa ngokukhawuleza. Oku kunokwenziwa ngokubeka isitya nge-jam kwisitya sokubanda kwamanzi abandayo, kwaye uguqula amanzi njengoko amanzi avuselela.
Siyilungisa isiraphu kwi-jam kwiziqhamo ze-gooseberry kwi-extract yamacembe e-cherry: sithatha amaqatha amathathu amacembe e-cherry, uhlambe kwaye uwafake epanini, uthele amanzi atshisayo, ubeke emlilweni obuthathaka, ufikelele emathunjini, ucofe amanzi, usebenzise kwaye usebenzise ukulungiselela isiraphu yesiraphu .
Silungiselela iifolo kwi-gooseberry. Iikomishi ezi-2 ze-gooseberries, ½ inkomishi yeshukela, i-1puni ye-lemon juice, i-litre amanzi, kunye ne-tip ch. isinamoni (kunye noshukela). Faka i-gooseberry kwi-juicer uze ufumane ijusi. Ijusi ixutywe kunye nejisi lemon, ushukela, isinamoni kunye namanzi ashushu.
I-Gooseberries nge-orange. 1 kilogram ye-gooseberry, 1 i-orange, 1-1, 3 kg. ushukela. Sidlula kwi-grinder ye-gooseberries kunye ne-orange (susa amathambo), yongeza ishukela, xuba kakuhle, udibanise kwiimbiza eziqhekekileyo, uvale kunye ne-plastiki kunye nesitolo kwifriji. Ngako oko, onke amavithamini aya kugcinwa.
Ukutya kwempilo kwamehlo enyama
Ngaba indoda inokuthanda omnye umfazi ebomini bakhe bonke?
Ukuchaneka njani ukuthetha nodokotela wezingane
Iibhontshisi zebhondi kunye nebhekoni
Umvuzo weentlobo ezimbini zeklabishi kunye nekhukhamba
Isaladi kunye neembotyi kunye nama-walnuts
Ummangaliso - isonka seDagestan ngokugxotha